ओली र पुनद्वारा त्रिशूलीको १० हजार कित्ता सेयर आवेदन, सर्वसाधारणले के गर्लान् ? « GDP Nepal
ओली र पुनद्वारा त्रिशूलीको १० हजार कित्ता सेयर आवेदन, सर्वसाधारणले के गर्लान् ?
Published On : 21 March, 2019 1:43 pm
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले त्रिशूली थ्री बीको क्रमशः १० हजार र १ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिएका छन् । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत त्रिशूलीको सेयर आवेदन खुलेको पहिलो दिन नै दुवैले आवेदन दिएका हुन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा १० हजार कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिएर शेयरको शुभारम्भ गरेका छन् । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम गत फागुन २ गते प्रधानमन्त्रीबाटै उद्घाटन भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले उत्साह जगाउन सेयर आवेदन गरे पनि सो कम्पनीको सेयरप्रति लगानीकर्ता भने त्यति उत्साहित छैनन् । यसर्थ, सबै सेयर पहिलो चरणमै बिक्री हुने हो कि हैन भन्ने आशंका छ ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जनताका साना साना पूँजी सङ्कलित गरेर ठूला आयोजनामार्फत आफ्नो मुलुक आफैँ बनाउन सकिने बताए ।
ओलीले मौरीले फूलको रस ल्याएर चाका बनाएजस्तै ठूला आयोजनामा जनताको लगानी बढाएर देशलाई स्वाधीन र समृद्ध बनाउन सकिने बताए ।
उनले भने, नेपाल ऊर्जाको धनी देश हो । पानीको सदुपयोग हुन नसकेको अवस्थामा यस्ता आयोजना सफल बनाउनुपर्छ । यसमा सहभागी हुन स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई म आग्रह गर्दछु ।